ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ဘကုန်းနဲ့ ဘလောက်ဂါများ
အို ..... သယ်ရင်း ဘလောက်ဂါတို့ရေ
စာရေးသူ ချမ်းလင်းနေ အချိန် 4:56 PM
naylinnhtun February 14, 2011 at 7:37 PM
ဟုတ်ပ အစ်ကိုရေ . .ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာတော့ လင့်တွေ စစ်ပြီးပြန်ချိတ်ထားပြီ . . . သိတဲ့အတိုင်း လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ
နေလို့ မရသလို ဘလောက်ဆိုတာကလည်း တစ်ခုထဲနဲ့ အထီးကျန်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား အစ်ကိုချမ်းလင်းနေရေ
ကိုထွဋ် February 14, 2011 at 9:57 PM
nandasara.ashin February 15, 2011 at 1:49 AM
ahphyulay February 15, 2011 at 8:03 AM
လူချင်းမတွေ့ ရပေမယ့်ရေးချင်တာခြင်းတူနေတော့ 
လည်း ၊ ခင်မင်မှုတွေ တိုးခဲ့ ရသလို ပါ။
အခု “ ဝဲ ” ကတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကျော်
မမက စ တယ်ထင်တာပဲ။ သူ့ တော့ မပြောရဲပါဗျာ။
တုတ်မှာစိုးလို့ ၊ အဲ .. သူ စ ဖြစ်တာဗျ။
သိ သလောက် ..။
khun February 17, 2011 at 7:33 AM
template အသစ်နဲ့လှနေတယ် အစ်ကို။
ခုတလော အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ကိုယ့်အိမ်တောင်
လာလည်ပြီး ကွန်မန့်တွေ အများကြီး ပေးသွားတာ
naylinnhtun February 17, 2011 at 7:34 AM
မောင်မျိုး February 17, 2011 at 7:34 AM
SHWE ZIN U February 17, 2011 at 7:35 AM
ရေချိုးပြီးလို့ ဆပ်ပြာတောင် တိုက်ထားပါသေးတယ်ဗျာ
ကိုထွဋ် February 17, 2011 at 7:36 AM
Crystal February 17, 2011 at 7:36 AM
မိုးယံ February 17, 2011 at 7:37 AM
ရေချိုးတယ် ချပ်ပါ တောင် တိုက်လိုက်သေးတယ်။
ဂျူလိုင်ဖြူ February 17, 2011 at 7:38 AM
မိုးငွေ့. February 17, 2011 at 7:39 AM
ရဲထွန်းဇော် February 17, 2011 at 7:39 AM
၀လုံးနဲ့ဘလောက်ဂါများ...ဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်... :) အခုတလောဘလောက်ဂါတွေအိမ်ပြင်ကြတယ်နော်
An Asian Tour Operator February 17, 2011 at 7:40 AM
တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားသူတွေလဲ ရှိပါတယ်ဗျား :P
ချမ်းလင်းနေ February 17, 2011 at 7:49 AM
ဒီကဗျာ စပ်မိမှပဲ ဝဲက ပြန်ကူးလိုက် ပြန်ဖြုတ်လိုက်နဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်ဆီမှာ ကူးတာက ကွန်မာန့်တွေဆီကနေ လာတာ။ ကွန်မန့်တွေ ပေးသွားချင်ရင် Name/ URl ကနေ အမည်လေးပဲ တပ်ပြီး ပေးကြတော့ ဝဲကူးမှု ကင်းဝေးတာပေါ့ဗျာ။
Maung Myo February 17, 2011 at 10:01 AM
ညလင်းအိမ် February 18, 2011 at 9:07 AM
အတူတူပဲ ကိုချမ်းရ .. ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း ကွန်မန့်ကလာတာ ... ဖျက်ရအုန်းမယ် .. အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပါပဲဗျာ ...း(
သက်ဝေ February 20, 2011 at 7:14 PM
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်...း))